विदेश जान ठ्याकै कति खर्च लाग्छ ? यस्तो छ देशगत लागत विवरण – Enepali Samchar
December 11, 2020 adminLeaveaComment on विदेश जान ठ्याकै कति खर्च लाग्छ ? यस्तो छ देशगत लागत विवरण
enepalisamchar काठमाडौँ। नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि संस्थागत रुपमा १ सय १० देश खुला गरिएको छ । यी मध्ये इराक र लिविया हाल रोक्का गरिएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कबारे जानकारी नहुँदा ठगिनुपर्ने हुन्छ तसर्थ ठगिनबाट जोगिनको लागि आफुँ जान लागेको देशमा जाँदा लाग्ने सेवा शुल्क बारे जानकार हुनु जरुरी छ ।
रेशम चौधरी छुटाउन माग गर्दै धर्नामा आफै पुगे गृहमन्त्री थापा, के–के भने? (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)